नाडा अटो शोमा विद्युतीय सवारी आकर्षणको केन्द्र बन्दैछ- निराकार श्रेष्ठ – BikashNews
नाडा अटो शोमा विद्युतीय सवारी आकर्षणको केन्द्र बन्दैछ- निराकार श्रेष्ठ
२०७५ भदौ २४ गते १३:१३ विकासन्युज
निराकार श्रेष्ठ, संयोजक- नाडा अटो शो २०१८
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन् अफ नेपालले भदौ २६ देखि ३१ गतेसम्म सवारी साधनहरुको वृहत प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०१८ आयोजना गर्दैछ । मेलामा ७१ वटा कम्पनीका १३४ वटा स्टलहरू रहने छन् र यो प्रदर्शनी विगतमा भन्दा ठूलो र आकर्षक रहने बताइएको छ । के के हुँदैछ यस प्रदर्शनीमा ? मन्दीको सामना गरिरहेको अटोमोवाईल बजारलाई यो मेलाले बुमको दिशामा फर्काउँछ त ? प्रस्तुत छ नाडाका कार्यसमिति सदस्य, नाडा अटो शोका संयोजक र लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।
नाडा अटो शोको तयारी कस्तो छ ?
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन् अफ नेपाल र ग्लोबल एक्सपोजिसन एण्ड म्यानेमेन्ट सर्भिसेजको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको नाडा अटो शो २०१८ को सबै तयारी पुरा भएको छ । मेलामा ७१ वटा कम्पनीका १३४ वटा स्टलहरू रहने छन् । शोमा १९ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे सवारी र २० वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे सवारी साधनहरू रहने छन् । अटो शोमा नयाँ प्राविधिक विकास, सवारी सुरक्षा प्रविधि, स्पेयर पार्टस, लुब्रिकेन्टस, टायर, ग्यारेज उपकरण, व्याट्री तथा अन्य एसेसरिजहरूको पनि सहभागिता रहनेछ ।
यस वर्षको मेलाको आकर्षण के के हुन्छन् ?
नाडा अटो शो आफैमा नेपालमा हुने अरु प्रदर्शनीभन्दा बृहत हुन्छ । गत वर्षभन्दा यस पटक थप चार ब्राण्डका मोटर साईकल, तीन ब्राण्डको कार थपिएका छन् । मेलाका लागि थप स्पेश आवश्यक भएकोले नयाँ डोम थपेका छौं ।
यस मेलामा सबैभन्दा बढी आकर्षण विद्युतीय सवारी हुनेछन् । ४/५ वटा कम्पनीले विभिन्न ब्राण्डको विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा राख्ने तयारी गरेको हामीले जानकारी पाएका छौं ।
विद्युतीय सवारीहरु कुन कुन कम्पनीहरुले राख्दैछन् ?
हुण्डाईले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा राख्दैछ । त्यस्तै टाटाले पनि पहिलो पटक विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा राख्न लागेको जानकारीमा आएको छ । महिन्द्रा र कियाले यसअघि नै नेपालमा विद्युतीय कार बिक्री वितरण शुरु गरेको छन् । अरु केही कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय सवारी राख्ने तयारीमा छन् ।
हुण्डाईले कस्तो गाडी ल्याउँदैछ ?
हामीले हुण्डाई आयोनिक सार्वजनिक गर्दैछौं । यो सेडान गाडी हो र हुण्डाई कम्पनीको अनुसार फूल चार्जमा २८० किलोमिटरसम्म गुढ्छ । यसको मूल्य नाडा अटो शोमा मात्र घोषणा गर्ने छौं ।
हुण्डाई आयोनिक प्रदर्शनीमा मात्र राखिन्छ कि बिक्री पनि हुन्छ ?
थोरै संख्यामा भित्रियो भने प्रदर्शनीमा मात्र रहने छ र बुकिङ ओपन हुनेछ । अलिबढी संख्यामा आयो भने बिक्रीमा पनि हुन्छन् ।
विद्युतीय सवारीको आकर्षण कस्तो छ ?
विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा विद्युतीय सवारीको माग ट्रेन स्पष्ट रुपमा आएको छैन । मानिसहरु वातावरणमैत्री बन्नको लागि, वातावरण प्रदुशणमुक्त बनाउने अभियानमा सहयोग गर्नको लागि विद्युतीय मोटर किनिरहेको छन् कि सरकारले विद्युतीय सवारी किन्नको लागि दिएको सहुलियतबाट लाभ लिन यस्तो गाडी किनिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भईसकेको छैन ।
हामीले विद्युतीय सवारी चढिरहेका र चढ्न चाहने सर्कलमा सानो सर्भे गरेको थियौं । त्यसमा पनि कोही वातावरणीय पक्षबाट प्रभावित भएको, कोही सरकारी सहुलियतबाट प्रभावित भएको देखियो । सरकारले विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएकोले नेपालीहरु यसतर्फ आकर्षित भएको देख्छि ।
ग्लोबल वार्मिङका मुख्य कारणहरुमध्ये सवारीसाधनबाट निष्कने प्रदुषण पनि महत्वपूर्ण फ्याक्टर हो भनेर वातावरणविद्हरुले औल्याएका छन् । विश्वभर ग्लोवल वार्मिङको आवाज बुलन्द हुँदै गर्दा विश्वका धेरै मोटर्स कम्पनीहरुले २०३० देखि २०४० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन नै बन्द गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि जागरुक उपभोक्ताहरु विद्युतीय सवारीप्रति चनाखो भएको पाईन्छ ।
विद्युतीय सवारीका चुनौतिहरु के छन् ?
१० वर्ष अघिदेखि विद्युतीय मोटरको प्रयोग हुन थालेको युरोपेली देशहरुमा पनि अझै आवश्यक पूर्वाधार बनेको छैन । नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार बन्न अझै धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । चार्जिङ स्टेशनहरु बन्न शुरु नै भएको छैन ।
सवारी किन्दा पर्ने लागत र सञ्चालन लागतको विसावले विद्युतीय सवारी सस्तो पर्छ कि महँगो ?
सामान्यतया गाडीको आयु १५ देखि २० वर्ष हो । विद्युतीय सवारीको मुख्य चुनौति भनेको ६/७ वर्षको दौरानमा व्याट्री फेर्नुपर्छ । व्याट्री निकै महँगो छ । पेट्रोल डिजेलमा चल्ने सवारीको इन्जिनभन्दा विद्युतीय सवारीको व्याट्री महँगो छ अहिलेको बजारमा । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्यो, व्याट्रीको उत्पादन र प्रयोग बढ्यो, प्रविधिमा पनि परिवर्तन आयो भने भविष्यमा व्याट्रीको मूल्य सस्तो पनि पर्न सक्छ तर आजको दिनमा विद्युतीय सवारी भन्दा डिजेट, पेट्रेलबाट चल्ने सवारी नै सस्तो पर्छ ।
गाडी किनिसकेपछि हुने इन्धन खर्च, पाटपूर्जा फेर्न, मर्मत गर्न आउने खर्च भने विद्युतीय सवारीमा सस्तो पर्छ । वर्षमा १० हजार किलोमिटर गाडी गुडाउनेले ५ वर्षमा ५० हजार किलोमिटर गाडी गुडाउँछ । अहिलेको मूल्यका आधारमा पाँच वर्षमा तेलको खर्च करिब ६ लाख रुपैयाँ आउँछ । विद्युतीय कारमा १ लाख ५० हजार खर्च आउँछ । विद्युतीय कारमा मेकानिकल पार्टस् थोरै हुन्छन् । त्यसैले मेकानिकल पार्टस् फेल हुने चान्स पनि कम हुन्छ । मर्मत र स्पेयर्स पाट्समा पनि खर्च कम हुन्छ ।
७ वर्षमा इन्धन र स्पेयर्स पाट्स हुने बचतले नयाँ व्याट्री किन्ने पुग्दैन ?
पुग्दैन । व्याट्रीको मूल्य गाडी मूल्यको ३५ देखि ४० प्रतिशत पर्छ । यसको आधारमा विद्युतीय कार महँगो नै पर्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको बजार विकासको लागि सरकारले दीर्घकालिन योजनासहित पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कस्ता पूर्वाधार निर्माण जरुरी छ ?
छिटो व्याट्री चार्जको लागि डिसि चार्जर मेसिन आवश्यक छ । यस्तो मेसिनले फूल चार्ज गर्न करिव एक घण्टा लाग्छ । यस्तो मेसिन चाइनिज किन्यो भने २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । यूरोपियन मेरिन ल्यायो भने ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । यी मेसिन राख्नको लागि ७० देखि ८० किलोवाट पावरको विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ । त्यसको लागि छुट्टै ट्रान्समिसन आवश्यक हुन्छ । मेसिन राख्ने ठाउँ पनि चाहियो । सबै लागत जोड्दा एउटा डिसि चार्जर राख्न करिव ७० लाख रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यसरी राखिएको मेसिनले २४ घण्टामा बढीमा २४ वटा गाडी चार्ज गर्न सक्छ । पेट्रोल पम्पले १२ घण्टामा २०० भन्दा बढी गाडीमा पेट्रोल हाल्न सक्छ भने डिसि चार्जरले १२ घण्टामा १२ वटा गाडीलाई मात्र चार्च गर्न सक्छ ।
अबको ३/४ वर्षको विद्युत उत्पादन माग भन्दा बढी हुन्छ भनिन्छ । त्यो सम्भव पनि देखिन्छ । तर आपूर्ति व्यवस्था राम्रो छैन । विद्युतीय सवारी चार्ज हुनको लागि कम्तिमा ३२ एम्पीयरको विद्युत जोडिएको हुनुपर्छ । हाल सर्बसाधारणको घरमा १६ एम्पीयरको विजुली जोडिएको हुन्छ ।
विद्युतीय कार किन्नेले घरमा कस्तो चार्जिङ सिस्टम बनाउनुपर्छ ? त्यसको लागि कति खर्च गर्नुपर्छ ?
गाडी किन्दा एउटा चार्जर आउँछ । त्यसबाट फूल चार्ज गर्न ८ देखि १० घण्टा लाग्छ । होम फाष्ट चार्जर किन्न दुई/साढे दुई लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यसले ४ देखि ५ घण्टामा फूल चार्ज गर्छ । पावर सप्लाईको भने समस्या हुन सक्छ । गाडी चार्जको लागि छुट्टै वाइरिङ हुनु आवश्यक छ ।
नाडा अटो शोले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
अटोमावाईल क्षेत्रमा मन्दी छ । ८० प्रतिशत उपभोक्ता बैंकबाट कर्जा लिएर गाडी किन्छन् । गत वर्ष सवारी कर्जा उपलब्ध नभएर पनि समस्या भयो । खुशीको कुरा नाडा अटो शोको सन्दर्भमा बैंकहरुले अटो कर्जाको व्याज घटाउन थालेका छन् । कर्जा लगानी योग्य पुँजी पनि उपलब्ध देखिन्छ । नाडा वा दशैं तिहारको सन्दर्भमा मुख्य बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा लगानी गर्ने देखिएको छ । त्यसले बजारलाई राम्रो सहयोग गर्नेछ ।
नाडा अटो शोमा उपभोक्ताको लागि कति छनौटको अवसर हुनेछ ?
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३ वटा नयाँ ब्राण्डका गाडी थपिएका छन्, मोटरसाईकलको ४ वटा नयाँ ब्राण्ड थपिएका छन् । सबैले आकर्षक योजनाहरु तयार गरेका छन्, उपहार राखेका छन् । यसले उपभोक्तालाई पर्याप्त छनौटको अवसर दिनेछ । फेष्टिवलको वातावरण बन्छ ।
शोरुममा भन्दा नाडा शोमा ग्राहकले के बढी लाभ लिन सक्छन् ?
शोमा पर्याप्त छनौटको अवसर हुन्छ । मूल्यमा पनि छुट हुन्छ । निर्णय पनि छिटो हुन्छ । दशैँ तिहारको स्कीमका अतिरिक्त अटो शोको ६ दिन अवधिका लागि अतिरिक्त सुविधा पनि कम्पनीहरुले दिन्छन् ।
मदिराको अन्तः शुल्क घटेपछि अबको मिसन सिमेन्ट र स्टिल उद्योग, बजार अझ सस्तो हुने